Shiinaha SPC Dabaqa JD-063 Soo-saar iyo Warshad | Dheeraad ah
Dabaqa SPC si ballaaran ayaa looga isticmaalaa goobaha ganacsiga. Waa nooc dabaq ah oo ku habboon dayactirka dhismayaasha duugga ah ee magaalada. Dabaqa qufulka PVC qufulka waxaa loo isticmaalaa qurxinta guriga. Intooda badani ma dooran doonaan dabaqa SPC. Sababtoo ah dabaqa SPC waxaa iska leh saxan adag oo adag, way adag tahay oo kuma haboona mudada horumarka lafaha carruurta. Dadka waayeelka ah waxay leeyihiin lugo xanuun badan. Dabaq aad u adag ayaa kordhin doona Darajada muruqyada lugta. Haddii kale, dad yar ayaa isticmaala, laakiin laguma talin in lagu qurxiyo guriga. Qaar badan oo ka mid ah macaamiisha qurxinta guryaha waxay aadaan Freescale waxayna la tashadaan sagxadda SPC. Ka dib markay wax ka barteen gogosha LVT ee laastikada ah iyo gogosha WPC, waxay isticmaalaan sagxad yar oo SPC ah.
Xiaobian waxay maqashay in dad badan oo suuqa jooga ay cibaadaystaan ​​dabaqa SPC, laakiin sidoo kale ay sakhraansan yihiin! SPC waxay leedahay astaamo gaar ah oo aan lala barbardhigi karin alwaax adag / sagxad sagxad ah / sagxad PVC. Waa kuwan ururinta shanta qaybood ee sida ugu fudud loo fahmay ee dabaqa SPC si loo soo celiyo runta!
1. Baaxadda codsigu way yar tahay
Dabaqa SPC waa shey aad u wanaagsan, oo leh faa'iidooyinka iska caabbinta, adkeysiga, iyo ilaalinta deegaanka ee cagaaran. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa meelo kala duwan oo gudaha ah. Daboolida caafimaadka, isboortiga, iskuulada, waxbarashada, xanaanooyinka, ganacsiga, xafiiska, iwm, waxaad arki kartaa muuqaalka dabaqa SPC.
2. Waqtiga dhalashada
Dabaqa qufulka PVC ayaa la isticmaali jiray oo caan ku ahaa toban sano Shiinaha. LVT sagxadda qufulka (3.2mm oo dhumucdiis ah) iyo WPC qufulka sagxadda (5.5mm5.0mm oo dhumucdiisuna) waa badeecadaha ugu muhiimsan ee gala iskuulada, isbitaalada iyo shirkadaha kale iyo hay'adaha ku yaal Shiinaha laga soo bilaabo bilowgii. Dabaqa SPC waa shey cusub oo dhashay shantii sano ee la soo dhaafay. Inta badan LVT / WPC waxaa soo saaray cadaadis saliid, waqtiga dhalmaduna waa ilaa iyo 20 maalmood. Laakiin dabaqa SPC waxaa lagu soo saari karaa hal geeddi-socod, waqtiga dhalmadana waa la dhimi karaa dhowr jeer.
Hore: SPC Dabaqa JD-062
Xiga: WPC Dabaqa M001
SPC Dabaqa JD-067
SPC Dabaqa JD-065
SPC Dabaqa JD-066
SPC Dabaqa JD-068